Hirmen (ဟားမန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Hirmen (ဟားမန်း)
Hirmen (ဟားမန်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Hirmen (ဟားမန်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Hirmen (ဟားမန်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Hirmen ဆိုတာ အောက်ပါ ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ ဆေးထုတ်ကုန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Sodium chondroitin sulfate……………………90mg
Pyridoxine HCl ……………………………..25mg
– အကြောတက်ခြင်း ၊ ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း ၊ အဆစ်အမြစ်များနာကျင်ခြင်း ၊
– ခြေထောက်များ ၊ လက်များတွင် ထုံနေခြင်း ၊
– မျက်လုံးများညောင်းညာနေခြင်း ၊ beri beri ရောဂါဖြစ်ခြင်း ၊ ဝမ်ချုပ်ခြင်း ၊
– ကိုယ်ခန္ဓါ အားအင်ချိနဲ့ခြင်း ၊ ရောဂါဖြစ်နေစဉ် သို့ ဖြစ်ပြီးအချိန်တွင် ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်နေစဉ်တွင် ဗီတာမင် B ဖြည့်စွက်စာ အနေနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ် ။
Hirmen (ဟားမန်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
– ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ဆေးပမာဏနှင့် ဆေးသောက်ရန် အစီအစဉ်အတိုင်းဆေးကိုသောက်သုံးရပါမယ် ။
– ဆေးမသောက်ခင် ဆေးညွှန်းကိုသေချာဖတ်ရပါမယ် ။
– ဆေးညွှန်ကို သေချာနားမလည်လျှင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းရပါမယ် ။
Hirmen (ဟားမန်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Hirmen ဆေးကို အလင်းရောင်နှင့် စိုစွတ်မှုများကင်းဝေးသော အခန်းအပူချိန်မှာထားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဆေးတွေကိုမပျက်ဆီးစေရန် ရေချိုးခန်း နှင့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးရှောင်ကျဉ်ရပါမည်။ ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံတွေကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
သိမ်းဆည်းရာတွင်ဆေးတွင်ပါဝင်သောအညွှန်းကို သေချာဖတ်ရင်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ ဆေးဝါးတွေကိုလည်း ကလေးတွေနဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေဆီမရောက်စေရန် သိမ်းဆည်းထားရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဆေးကို အိမ်သာတွေ ရေမြာင်းတွေထဲမှာ ညွှန်ကြားမထားပဲ သွန်ပစ်ခြင်းမျိုးကိုမလုပ်ရပါဘူး။ ဆေးကိုမလိုတော့တဲ့အခါ သို့ ဒိတ်ကုန်သွားတဲ့အခါသေသေချာချာစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ရဲဆေးကိုဘယ်လိုသေသေချာချာစွန့်ပစ်သင့်သလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ဆီမှာမေးမြန်းတိုင်ပ်သင့်ပါတယ်။
Hirmen (ဟားမန်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
– hirmen ပါဝင်သောပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
– ဆေးဝါးများ ၊ဆိုးဆေးများ ၊အစားအစာများ ၊တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ။
– hirmen နှင့်ဓါတ်မတည့်သောဆေးများသုံးစွဲနေလျှင် သို့ ဓါတ်မတည့်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများရှိလျှင်…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Hirmen (ဟားမန်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ၊နို့တိုက်စဉ်မှာဆေးသုံးစွဲခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းမကင်း သေသေချာချာ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေမရှိသေးပါဘူး။
Hirmen (ဟားမန်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Hirmen လိမ်းဆေးဟာလည်ယ အခြားဆေးတွေလိုပဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ ဖြစ်ခဲပြီးတော့ ထပ်ပြီးကုသမှုတွေခံယူစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆေးသုံးစွဲပြီးတဲ့အခါ ပြသနာတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အချို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ။
– အစာအိမ်ရောင်ခြင်း ၊ သွေးဓါတ်မတည့်မှုများရှိခြင်း ၊ ပေါက်နိုင်တဲ့အစာအိမ်အနာများဖြစ်ခြင်း ၊ glucose ဓါတ်မညီမျှခြင်း ၊သွေးထဲတွင် uric acid ဓါတ်များနေခြင်း ၊ အသဲအလုပ်လုပ်ပုံမညီမမျှဖြစ်လာခြင်း ၊ အာရုံကြောပြဿနာများ ရှိလာခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
လူတိုင်းတော့ဒီဆိုးကျိုးတွေကို မခံစားရပါဘူး ။ အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းမှာမပါတဲ့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ် ။ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသိချင်သေးရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ဆက်လက်တိုင်ပင်ရပါမယ် ။
ဘယ်ဆေးတွေက Hirmen (ဟားမန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Hirmen ဟာသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီး ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံတွေပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးအချင်းချင်းမတည့်တာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆေးတွေကိုစာရင်းပြုလုပ်ထားပြီးဆရာဝန်ကိုအသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Hirmen (ဟားမန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Hirmen ဟာ အစားအစာတွေ အရက်တွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်း သို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုဆိုးစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆေးမသုံးစွဲမီ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Hirmen (ဟားမန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Hirmen ဟာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သက်ရောက်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်ရောက်ခြင်းဟာ ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံ သို့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုပြီးဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာရှိနေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန်ကိုအသိပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Hirmen (ဟားမန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Hirmen hydrochloride သုံးစွဲရန်ပမာဏကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကတော့ တခါသောက်လျှင် ၁ လုံး တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ် ဖြစ်ပါတယ် ။
ကလေးတွေအတွက် Hirmen (ဟားမန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Hirmen hydrochloride သုံးစွဲရန်ပမာဏကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
-အသက် ၈ နှစ်အထက်ကလေးများအတွက်ကတော့ တစ်ခါသောက်လျှင် ၁ လုံးတစ်နေ့ကို၂ ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် ။
– အသက် ၈ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ကတော့ ဆေးပမာဏကိုဖော်ပြမထားပါဘူး ။ သင့်ရဲ့ကလေးအတွက်စိတ်မချရနိုင်ပါဘူး ။ အသုံးမပြုခင် ဆေးဟာဘယ်လောက်စိတ်ချရတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် ။ အသေးစိတ်သိရဖို့အတွက် ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့မေးမြန်းသင့်ပါတယ် ။
Hirmen (ဟားမန်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Hirmen ဆေးကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးပမာဏနဲ့ပုံစံအတိုင်းရနိုင်ပါတယ် ။
– ပျော့ပြောင်းသော ဆေးတောင့်ပုံစံနဲ့ရနိုင်ပါတယ် ။
အနီးစပ်ဆုံးအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုကို ခေါ်ခြင်း သို့ အနီးစပ်ဆုံးအရေးပေါ်အခန်းကိုသွားရောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမယ်။
အကယ်၍ဆေးသောက်သုံးရန်မေ့လျော့ခဲ့ပါက သတိရရခြင်းသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ သတိရတဲ့အချိန်ဟာ နောက်တကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်သောက်သင့်ပါတယ်။ ၂ ဆသောက်သုံးခြင်းမျိုးတော့မပြုလုပ်ရပါဘူး။
Hirmen. https://medlineplus.gov/druginfo/natural/744.html. Accessed October, 20, 2016.
Hirmen. http://www.observatoiredescosmetiques.com/ingredient-cosmetique/sodium-chondroitin-sulfate-3736. Accessed October, 20, 2016.
Hirmen. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-744-chondroitin%20sulfate.aspx?activeingredientid=744&activeingredientname=chondroitin%20sulfate. Accessed October, 20, 2016.
Hirmen. http://www.medicinenet.com/diphenhydramine/article.htm. Accessed October, 20, 2016.
လေးဖက်နာဖြစ်လာဖို့ အန္တရာယ်ပိုများစေတဲ့ အလုပ်အကိုင်များ
ခန္ဓါကိုယ်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများကို အချိန်တိုအတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် နည်းလမ်းများ